संघीयताको खर्च धान्न कर बढाइएको हो : अर्थमन्त्री डा. खतिवडा - Nepali Online News Media-shikharnews.com
संघीयताको खर्च धान्न कर बढाइएको हो : अर्थमन्त्री डा. खतिवडा
२०७५ जेठ २१ सोमवार
काठमाडौं, २१ जेठ- अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीयता खर्चिलो भएकाले त्यसै अनुसार बजेट विनियोजन र करको मूल्य बढाउनु परेको स्पष्टिकरण दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा संसदमा आइतबार उठेका सवालको जवाफ दिंदै खतिवडाले जनताको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्दै समृद्धितर्फ पाइला चाल्दै आव २०७५/०७६ को बजेट ल्याइएको बताएका छन् ।
सबै तहको बजेट जोड्दा १५ खर्ब रूपैयाँको बजेट हुने र विकास खर्च ५ खर्ब रूपैयाँ जोडेर मात्र मुलुकभरको बजेट भएको बताए । संघीयता अनुसार बजेट बाँडिएको भन्दै उनले त्यसैगरी हेर्नुपर्ने बताए । संघीयता राज्यको खर्च भार बढेकाले त्यसलाई गति दिन कर बढाउनुपरेको जवाफ दिए ।
’संघीयता खर्चिलो छ, त्यसलाई धान्नुपर्छ, सोहीअनुसार बजेट विनियोजन भएको छ । करको गति पनि बढेको छ ।’ बजेट समाजवादतर्फ उन्मुख भएको बताएका छन् । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको जवाफ थियो,’बजेट राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणको पक्षमा छ, यो समृद्धिबाट समाजवादतर्फ उन्मुख प्रगतिशील बाटोमा अगाडि बढेको छ ।’ नागरिकलाई उत्पादनसँग जोड्न बजेटले सघाउने उत्तर दिए ।
संघीयता कार्यान्वयन ७ सय ६१ वटा सरकारको कुरा भैरहेका बेला राजश्व बाँडफाँट बाँडिएको जिकिर गरे । ‘अनुदानसहितको पहिलो बजेट ल्याएका छौँ । पहिलेका एकल बजेटसँग तुलना गर्नु हुँदैन ।’